Hadal-haynta Maalmahan: Tirsiga 28aad Geeddiga hakaday: Doorashooyinkii
Dhowr sannadood oo nidaam digtaatooriya, millateriya oo qabaliya si qarsoodi ah la iskugu hoos abaabulayay. Xidhiidh joogta ah oo toos iyo dadab labadaba ahaa oo ka dhex socday Jaaliyadaha dibadaha iyo unugyadii gudaha laguna aloosayay urur siyaasadeed oo lagaga hor tago nidaamkii daallinka ahaa ee Siyaad Barre
Hadal-haynta Maalmahan: Tirsiga 27aad Kol haddaan la Koreyn (Xafladdii Qalin-jebinta Hormadii 11aad ee Jaamicadda Hargeysa)
Waa Qormo qormadeed…….Qabax…..Qardhac iyo quxub midna kuma iman. Waa qiimayn……Waa qurux……Waa qaddarin…….Waa maalin farxadeed……..Waa qalin-jebintii Hormada 11aad ee Jaamicadda Hargeysa
Hadal-haynta Maalmahan: Tirsiga 25aad Muranka Diiwaan-gelinta iyo Mugga Xildhibaannada
Qofka maanta ku dooda Doorashooyinkii qorshaysnaa waa la carqaladaynayaa, la yaab ma laha. Maxaa yeelay, wuxu ka saadaaliyay saan-saanka muuqda. Ifafaalaha muuqda iyo saadaashuba ma saalloona. Daliilkeedu wuxu yahay:
Hadal-haynta Maalmahan: Tirsiga 23aad Diiwaan-gelinta la isu barkiyay: Waa dibudhaca Doorashooyinka
Qodobka 4aad ee Dastuurka Qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaynu ku daah-furnay qormadan kooban ee Khamiislaha ah. Waa Dastuurkii aynu aftida Qaran u qaadnay 31kii Meey, 2001dii.
Hadal-haynta Maalmahan: Tirsiga 21aad Xiddigaha Geeska: Foolaadka Fanka iyo Farshaxanka
Ma Xiddigo habeen oo qudh ah muuqda ayaad moodaysaan. Waa Xiddigo aan hadh iyo habeenba dhicin. Habeenkii waa la wada arkaa oo cidna caad kama saarna. Xataa maalintii ayay muuqdaan oo iftiinka cadceeddu ma qariyo.
Hadal-haynta Maalmahan: Tirsiga 19aad Muddo-dhaafka muddo-dhaafka: Diiwaan-gelinta cod-bixiyayaasha
Waa mar kale iyo ma-hadhadii Diiwaan-gelinta Cod-bixiyayaasha. Waa Mowduuc xiisihiisa iyo xadantiisaba leh. Qof kasta ma damqo, bal se wixii dooc iyo dareenba leh ayaa ka gil-gisha.
Hadal-haynta Maalmahan: Tirsiga 18aad Mudane, Siilaanyo yaa cafiska ka codsanaya ee uu ka cabanayaa
Waa 29kii Ramadaan, 1434 Hijriyada, kuna beegan galab Axadeed oo ay bishan Juulay tahay 27, 2014ka. Shalay ayaan Jabuuti ka soo noqday.
Hadal-haynta Maalmahan: Tirsiga 11aad, 12aad, 13aad.
Haa…..Waa tuduc ka mid ah dhaxalkii suugaaneed ee Faarax Nuur inooga tegay soddonaadkii Qarnigii 20aad. Waa suugaanta aan duugoobin ee saacad walba taagan. Sidaas ayay suugaan dhab ah ku tahay oo mar walba loo soo xigtaa.
Arar iyo ardaa la isu soo fadhiistaba la dhaaf. Unuunkii ayay taagan tahay. Bishii Maarj, 2008dii ayaa Hudheelka Ambassador lagu soo xidhay Shirweynihii 2aad ee Xisbiga Kulmiye oo markaa ama beryahaa ahaa mucaarad macangag ah.
Aragtidii Hoggaamiye Cigaal ee Qalalaasaha Soomaaliya iyo mowduucyo kale oo xiiso leh
12 sannadood ayaa ka soo wareegtay markii la soo gebagebeeyay aaskii, baroor-diiqdii iyo tacsidii Hoggaamiyihii, Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal
Magaca Heesta: Xisbiyada Ereyadii: Boobe Yuusuf Ducaale
Laxankii: Aadan Xuseen, Karroone, Muusiggii: Axmed-weli, Furinle,
Duubistii: Maxamed Aw Aadan, Isku-dubbaridkii: Cabdiraxmaan Dheegsan Codadkii: